Midabada hore: maxay yihiin iyo 50 gogol-xaadh iyo fikrado la isugu geeyo | Abuurista khadka tooska ah
Lola curiel | | General, Dhiirrigelinta, Waraaqaha midabaynta, Khayraadka
Midabada Pastel waa isbeddel. Naqshadeynta garaafka waxay heleen door cusub oo hadda looma adeegsan oo keliya mashaariicda la xiriira carruurta ama dheddignimada, waxay noqotay bilic aad u qiimo badan! Haddii aad rabto inaad si guul leh ugu biiriso codadkan naqshadahaagaMa dhaafi kartid qoraalkan aan kuugu sheegayo waxa midabbada hore ay yihiin waxaanan idinla wadaagayaa 50 waraaqaha iyo fikradaha ah inaan isku daro.
1 Waa maxay midabada hore?
2 Sida loo isku daro midabada hore
2.1 Abuur iskudhafyo iskudhaf ah kuna ciyaar xoogga midabada
2.2 Sharad midab weyn
2.3 Isticmaal isku-darka guuleysta
2.4 Soo bandhig codad dhexdhexaad ah
2.5 Wax ka baro shineemooyinka
2.6 Raadi dhiirigelin ku saabsan dabeecadda iyo sawir qaadista
3 50 caleemo qoyan
Waa maxay midabada hore?
Farsamo ahaan waxaan u qeexi karnaa midabada hore sida midabada lagu dhisay iftiin sare iyo dhereg hoose ama celcelis Laakiin maxay ku leeyihiin magacaas? Asalka waa in laga raadiyaa aduunka rinjiyeynta. In Renaissance ah "pastels" bilaabay in la isticmaalo, qalimaan la mid ah midabyada laga sameeyo midabbada budada ah iyo guntin (cusbi, caag ama dhoob). Qarnigii XNUMX-aad waxay noqdeen kuwa caan ah oo rinjiyeyaasha dhererka Edgar Degas ama Jean Monet mar kale ayay isticmaaleen qarnigii XIX.
Si kastaba ha ahaatee, maanta waxaan u adeegsaneynaa ereyga "pastel" midab tilmaamaysa midabbo muujinaya dareen jilicsan. Midabada waxay u adeegtaa isgaarsiinta iyo, dhaqan ahaan, codadkan waxay la xiriireen dhallaanka iyo naagta, maxaa yeelay waxay soo gudbiyaan dareen deggan iyo macaan. Xaqiiqdii, noocyada sida Evax & Tampax waxay qaateen bilicsanaanta fiidiyowyadeeda iyo waxyaabaha ku saabsan xayeysiinta ee loogu talagalay haweenka.
Cunto Instagram ah @Drcord
Si kastaba ha noqotee, khudbadaha ku saabsan xayeysiinta iyo naqshadeynta garaafka ayaa si isdaba joog ah isu beddelaya. Shabakadaha bulshada, sida Instagram, farshaxan-yahannada iyo nashqadeeyayaasha ayaa doortay midabbada midabbada ah si ay u muujiyaan hal-abuurkooda, ka goynta tones pastel munaasabado badan macnaha dhaqan ahaan loo siiyay. Sanadkii la soo dhaafay, hooskaani sidoo kale waxay noqdeen isbeddellada adduunka moodada waxaanan soo aragnay sida daaqadaha loogu daadiyay dhar duug ah si guga loogu soo dhoweeyo Ma rabtaa inaad barato sida loo isku daro midabadan si loogu isticmaalo naqshadahaaga?
Abuur iskudhafyo iskudhaf ah kuna ciyaar xoogga midabada
Ikhtiyaar wanaagsan oo loogu talagalay isku dar midabada hore si aan khatar lahayn waa in la abuuro a palet monochrome laga soo qaatay hal midab oo pastel ah. Inaad ku ciyaarto xoojinta midabada, waxaad awoodi doontaa inaad soo bandhigto waxyaalo ka soo horjeeda isku darka waxaadna ku guuleysan doontaa bilicsanaan aad u wanaagsan. Waxaad isticmaali kartaa qalab, sida Adobe Color, si loo abuuro palette noocan ah.
Sharad midab weyn
Uma baahnid inaad ka tanaasusho midabada kala duwan, haddii aad rabto inaad isticmaasho midabbo kala duwan oo aad u kala duwan, waad sameyn kartaa! Sifudud, sharad midkoodna inuu noqdo dunta guud oo u adeegso sidii midab aasaasi ah si loo siiyo caqli galnimo iyo isku xirnaanshaha qaabeynta. Haddii aad sameyso, dib-u-heshiisiinta midabada kala duwan ee pastel dhib kugu noqon maayo.
Isticmaal isku-darka guuleysta
Waxaa jira iskudhafyo noo siman oo annaga noogu wacan. Tusaale ahaan, buluug pastel iyo oranji pastel, Iyaga oo iska soo horjeeda chromatic, waxay si fiican u guursadaan. Sidoo kale waa fikrad aad u wanaagsan in la isku daro buluug pastel leh aqua badda iyo codad huruud ah. Haddii aad sidoo kale ku darto midabada qaawan ee palette, waxaa si toos ah laguugu qaadi doonaa xagaaga.
El Cagaarka cagaaran lagu dari karaa iyada chromatic soo horjeedda, ka pink. Haddii aad rabto inaad kobciso midabada midabka, waxaad isticmaali kartaa midabyo kala duwan oo cagaar iyo casaan ah. Codka dhulka, khaki ama beige sidoo kale waa wehel wanaagsan oo u diidaya cagaarka. Casaanka hore, wuxuu si fiican ula jaan qaadayaa lilac, analog on wheel midabka. Xaqiiqdii, waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan, tan iyo markii lagu dari karo ku dhowaad dhawaaq kasta oo jilicsan.
Soo bandhig codad dhexdhexaad ah
Waxaad isku dari kartaa midabada hore codad dhexdhexaad ah, sida cawl ama cadaan. Waa nooc ka mid ah naqshadaynta dheelitirka. Haddii ujeeddadaadu tahay "bilicsanaanta hore" inay badato, ka dhig midabka dhexdhexaadka ah dhammaystir iyo midabka hore ee salka midabka midabka leh.
Wax ka baro shineemooyinka
Muuqaal ka socda filimka «Mashruuca Florida»
Adduunyada shineemo, midabku waa mid ka mid ah dhinacyada ugu taxaddar badan ee muuqaalka. Xaqiiqdii, waxaa jira aflaam, wixii ka baxsan waxa ay ka kooban yihiin, taagan oo si xushmad leh loo amaano mahadnaqa ay u leeyihiin daaweyntooda midabyada. Si ay u sameyso palette-gaaga midabada ah waxaa kugu dhiirrigelin kara muuqaallada ka soo baxa filimadaas, ku habeyn iyada oo ku saleysan codadka ku badan iyaga iyo in si gaar ah loo eego sida loo hirgaliyo. Tusaale ahaan, filimada sida "Mashruuca Florida" ama "Maqaarka" waxay si cad ugu heellan tahay noocan ah bilicsanaanta.
Raadi dhiirigelin ku saabsan dabeecadda iyo sawir qaadista
Dabeecadu waa a ilaha aan la koobi karin ee dhiirigelinta iyo fikradaha. Xeebta, qorrax dhaca, midabada qaanso roobaadka, waxaa jira goobo fara badan oo ay ku jiraan midabada hore oo iyagu diyaar ayey u yihiin inaad isticmaasho! Tag sawirrada bey'adaha dabiiciga ah iyo muuqaalka magaalooyinka, isticmaal indha-fiiq si loo ogaado midabada iyo abuuro palette shakhsi iyo mid gaar ah.
50 caleemo qoyan
Kadib waxaan kuu dhaafi doonaa xul ah oo ah waraaqaha taasi ayaa ku dhiirrigelin doonta iyo inaad u isticmaali karto naqshadahaaga. Ma aha dhammaan midabada iyaga ka kooban inay yihiin codadkii hore, laakiin mararka qaarkood waa wax xiiso leh in la soo bandhigo midabbo aad u muuqda ama kuwa madow oo ku daraya kala duwanaanta kala duwanaanta. Wax walba waxay ku xirnaan doonaan waxa aad rabto inaad ku gaarto nashqaddaada, haddii aad rabto inaad sameysid sawirro siman, mid isku mid ah, ama muuqaal hoose ama isugeyn ah, ka dooro waraaqaha jilicsan ee jilicsan ama midabbada isku midabka ah. Laakiin, waxaad soo bandhigi kartaa midabyo jabaya bilicsanaanta jilicsan of pastel shades Waa arrin isku day ah!
Si aad si sax ah u isticmaasho isla midabada aan soo jeedineyno, qor lambarrada midabka oo ku yaal dhinaca midig ee sawirrada. Isku day inaad la ciyaarto baalayaasha! Isku qas iyaga, abuuro iskudhaf cusub iyo ku waafaji qaabkaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Midabada hore: maxay yihiin iyo 50 gogol-xaadh iyo fikrado la isku daro
Barnaamijyo lagu abuurayo fiidiyowyo